🌳⛰️🌄Chalet | Olivais Santa Clara Lodge |Mazantsi eMinas - I-Airbnb
🌳⛰️🌄Chalet | Olivais Santa Clara Lodge |Mazantsi eMinas
Ifama sinombuki zindwendwe onguTaynã
Phinda uqhagamshelane nendalo kule ndawo ungalibalekiyo.
Chitha iintsuku ezimangalisayo kwi-chalet phakathi kweentaba kunye nemithi yomnquma kumazantsi eMinas Gerais (kwisekethe yaseGonçalves, eCambuí naseMonte Verde). indawo enkulu
inomtsalane kwaye imnandi ngenye yeembono ezintle kakhulu onokuthi uzibone. Ibekwe phezu kwentaba embindini wendawo ekulinywa kuyo imithi yomnquma. Indawo yamava akhethekileyo: ukuphuma kwelanga ngaphezu kwamafu, indawo yomlilo enewayini, umlilo kunye neehammocks.
I-chalet ifumaneka nje nge-180km ukusuka eSão Paulo, kwisixeko saseCambuí (MG). Kubantu abathanda ukuzola noxolo, yeyona ndawo ifanelekileyo "yokuqhawula unxibelelwano" kubuphithiphithi bezixeko ezikhulu ngempelaveki kwaye bonwabele indawo eneendawo ezintle zomhlaba.
Ukongeza, kukho ithuba lokunandipha ubuhle bendawo njengokutya kwasemini kwiidolophu ezithandekayo zaseMonte Verde (MG) okanye iGonçalves (MG) emalunga neyure enye.
ISão Paulo (SP): 180km
I-Monte Verde (Mg): 61km
IGonçalves (MG): 40km
I-chalet yakhiwa yintsapho eyayifuna ukusondela kwindalo kunye nemijikelo yayo kwaye ngaloo ndlela yaqalisa ukutyalwa kwemithi yomnquma yokuvelisa ioli. Ke, unokuhamba ujikeleze ipropathi kwaye ufumane amagcume omnquma weSítio Santa Clara.
Xa sihlala apha, siya kubonisa uthotho lokhenketho olucetyisiweyo lokufumana ukhenketho lwasemaphandleni eMinas Gerais: isidlo sasemini kunye nokutya kwasekhaya, ukutyelela kwindawo emileyo, i-organic strawberry plantation, i-cheese factory, i-dulce de leche factory, phakathi kwezinye iindawo.
Kwabo bathanda ukuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile, kunokwenzeka ukuba uthathe iindlela kwiindlela ezijikeleze indawo. Nangona kunjalo, kukulungele ukulungiselela umlenze (yintaba, kunjalo!).
Ebusuku kunokwenzeka ukuba ujabulele indawo ye-hammock ecaleni komlilo kunye nesibhakabhaka esigcwele iinkwenkwezi. Kwaye abo bathanda ukuvuka kusasa, lithuba lokubukela ukuphuma kwelanga emazantsi ngaphezu kwamafu. Amava awodwa.
I-chalet igcina abantu aba-4. Inebhedi eyiKing Size kwigumbi lokulala kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini kwigumbi lokuhlala. Izithuba ziyadityaniswa (ifomathi yestudio).
- umgodi womlilo
-i-hydromassage ngonyango lombala
-ishawa kunye ne-hydromassage ethe nkqo
- parrilla Uruguay
- iwayini House
-Ibhedi kaKumkani enomandlalo ka-Emma, amashiti e-satin kunye neetawuli ezinkulu zaseJiphutha.
-INetflix, iDisney kunye neAmazon prime (nangona indalo ingcono kakhulu)
Ukufikelela kwi-chalet, kuya kufuneka uhambe malunga ne-4KM kwindlela emdaka. Ngexesha lemvula, sincoma ukusebenzisa imoto ende okanye i-4X4. Ukuba kuyimfuneko, sinokunikezela ngenkonzo yezothutho ye-4X4 (ngokuxhomekeke kubukho).
QAPHELA: NGEKHAYA LAKOMBI
Ikhaya le-Kombi eliboniswe kwisithombe liyafumaneka ukuba lirente ngamaxabiso ongezelelweyo (ngokuxhomekeke ekufumanekeni) ukuze lisetyenziswe ngeendlela ezi-2:
A) Igumbi lokulala elongezelelweyo labantu aba-2. IneNetflix, iAmazon prime, i-sunroof yokulala ibukele iinkwenkwezi (akukho xesha lemvula)
B) Amava. Ukurenta ixesha leeyure ze-4 zokusetyenziswa ecaleni kwe-cottage (iseshoni ye-popcorn, i-PicNic, ukubhiyozela usuku lokuzalwa).
Ngenxa yezizathu zokhuseleko, iKombi irentelwa ukusetyenziswa okusisigxina, ngaphandle kokuhamba.
I-Kombi ayiqukwanga kwireyithi yemihla ngemihla, inokuqeshwa ngentlawulo eyongezelelweyo.
Nceda ubonise inani elichanekileyo leendwendwe xa ubhukisha.
1) Ngaba iWi-Fi ikuvumela ukuba usebenze kwiofisi yaseKhaya?
Ewe, usapho lwethu lusebenzisa i-intanethi yonke imihla kwiintlanganiso zevidiyo (zoom, dibana, njl.njl…). Uqhagamshelwano luyakhawuleza kwaye lulungile. Nangona kunjalo, yi-intanethi yasemaphandleni kwaye inokuba nokuguquguquka (kunye nayo yonke i-intanethi…lol). Kumava ethu apha, kunqabile kakhulu ukuba ngaphandle kwe-intanethi.
2) Ngaba ufuna ukuzisa ilinen yokulala kunye neetawuli?
Akukho mfuneko, sele siyenze yafumaneka.
3) Liliphi ixesha lokungena kunye nokuphuma? Ngaba kunokwenzeka ukutshintsha?
Ukungena ngo-15:00 kwaye kuphuma ngo-12:00.
Ngokuxhomekeke kubhukisho ngaphambi nasemva komhla owukhethileyo, sinokwenza iishedyuli zakho zibe bhetyebhetye.
4) Ingaba ikhona indawo yokutyela ekufutshane? Ukuhanjiswa kwempahla? Unike isidlo sakusasa?
Asinayo inkonzo yokutya esizeni kwaye akukho nkonzo yokuhanjiswa kweenkonzo (indawo yasemaphandleni). Iindawo zokutyela ezikufutshane zimalunga ne-25min. Ukuze ujabulele ngakumbi indawo yokuhlala, sincoma ukuzisa ukutya okupheka kwi-chalet ngokwayo (ikhitshi epheleleyo).
I-HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Disney+, I-Netflix
Le ndawo ikwindawo yasemaphandleni kumazantsi eMinas. Yindawo yoxolo olukhulu kunye nokuzola.
Azikho iivenkile ezinkulu, iivenkile kunye nezinto eziluncedo kufutshane. Sicebisa ukuba uze negrosari.
Ukuba ufuna njalo, ivenkile enkulu imalunga nemizuzu engama-30 kude (edolophini).
Umbuki zindwendwe ngu- Taynã
Intsapho yakowethu yenza inguqulelo isuka eSão Paulo isiya kumazantsi eMinas.
Sisesandleni sakho ngentetho entle malunga neenguqu zobomi. I-WhatsApp yethu iya kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho ukuphendula nayiphi na imibuzo.
Sinendlu yenkxaso emalunga neemitha ezingama-200 ukusuka kwi-chalet.
Sisesandleni sakho ngentetho entle malunga neenguqu zobomi. I-WhatsApp yethu iya kufumaneka…